Bayavutha abasebenzi basemakhazeni kahulumeni | News24
Bayavutha abasebenzi basemakhazeni kahulumeni
PHOTO: Indlu yangasese esekuphele izinyanga ingasebenzi.
BAVUTHA bengabaselwe abasebenzi basemakhazeni kahulumeni esibhedlela i-Fort Napier nabathi uNgqongqoshe woMnyango wezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo angamane abaxoshe kunokuthi baqhubeke ngaphansi kwezimo abasebenza kuzona njengamanje.
Laba basebenzi baqale ukusebenza behudula izinyawo emasontweni ambalwa adlule nalapho benqume khona ukuthi bazohlinza izidumbu ezimbili kuphela ngosuku.
Lokhu kugcine sekuba nomthelela emindenini elahlekelwe njengoba beyigcina ingayitholi imizimba yabathandiweyo babo ngesikhathi.
I-Echo ivakashele lesi sibhedlela ngoMsombuluko mhla zili-19 kuLwezi (November) nalapho ifike yakhuluma nabasebenzi bakule ndawo abangenelisekile.
Lokhu kuza ngemuva kokuba uDkt Dhlomo evakashele le ndawo ngoLwesithathu olwedlule nalapho efike wahlonza khona izidumbu ezimbili ezinye zabe sezithathwa ukuba ziyohlinzwa kwezinye izindawo ukuze imindeni yazo izokwazi ukuzithola ngesikhathi.
Omunye wabasebenzi ongathandanga ukuba kudalulwe igama lakhe uthe zonke izinsuku baphila nephunga elingabekeleleki nelizwakala ungena emnyango lapho kulinda khona imindeni esuke izobheka othandiweyo bayo. Uthe into eyenza ukuba kube naleli phunga ingoba ama-air conditioning systems amaningi awasebenzi kanti kunemizimba eseyiqede iminyaka ingalandwa.
“Into eyenze ukuthi sithi senza imizimba emibili kuphela ngosuku ingoba siyashoda vele kodwa futhi sibtshelewa ukuba kumele sihlonze imizimba eli-12 ngosuku. Besilinde ukuthi uDhlomo aphendule kwizikhalo zethu ngoLwesihlanu olwedlule kodwa namanje kusathulekile. Uma kungukuthi kuqhubeka kanje sisazoqhubeka nje nokuthi sihlonze izidumbu ezimbili kuphela ngosuku ngoba ikhona okungangamandla ethu lokho.
“Ngonyaka owedlule sathenjiswa ukuthi kuzothuthukiswa izinsiza kusebenza emakhazeni wonke kahulumeni esifundazweni sonke kodwa loko akwenzeki.Abanye abasebenzi abanawo ngisho umfaniswano ophelele kanti amakhemikhali okuhlanza wona aze afika ngesonto eledlule ekubeni agcina ukufika eminyakeni emine eyedlule,” kubeka yena. Omunye umsebenzi uthe : “Kumanje sibhekene nenkinga yokuthi ngisho sidla ekhishini silandelwa iphunga elibi eliphuma lapho kugcinwa khona imizimba yabantu abangasekho njengoba ama-air-conditioniong system engasebenzi. Njengoba engasebenzi kuholela ekutheni lonke iphunga liphumele ngaphandle lize liyofika lapho sidlela khona nalapho kuhlala khona amalunga omphakathi uma elinde ukusizwa.Akekho umuntu okumele asebenze ngaphansi kwesimo esifana nalesi ekubeni ehola amakinati futhi. Lokungahlanzeki kwale ndawo sekuholele ekutheni kube khona abasebenzi abagulayo kwaze kwaba bayadlula emhlabeni kodwa khona kunjalo umnyango ayikho into oyenzayo ukulungisa lezi zinkinga,” kubeka yena.
Ngesikhathi i-Echo ihambele kule ndawo ithole ithuba lokuba ingene ngaphakathi ibone izimo abasebenzi abasebenza ngaphansi kwazo. Uma ungena kule ndawo uhlangabezana nephunga elingalihle neze. Izindlu zangasese zomphakathi zabesifazane kanye nabesilisa zona azisebenzi kanti kuthiwa sekuphele izinyanga eziyisithupha zingasebenzi nokwenza umphakathi ugcine ususebenzisa izindlu zangasese ezimbili zabesilisa nezimbili zabesifazane ezakhelwe abasebenzi. Kunemizimba yabantu okubalwa khona nezingane ecishe ibe i-100 ehleli ingalandwa kanti eminye yayo kuthiwa yahlala kusukela ngonyaka wezi-2010.
Laba basebenzi bakhala nangokuthi abanazo izimpahla ezibavikele uma ngabe benza lo msebenzi kanti futhi noma beya ngaphandle abanye babo abanazo izicathulo ezivikelekile.
UMnu Skhumbuzo Mdlalose we-Congress of South African Trade Unions (Cosatu) uthe bayazazi izinkinga ezibhekene nabasebenzi wathi balinde ukuba babe nomhlangano nongqongqoshe wezempilo uDhlomo.
“Sifuna kulowo mhlangano kube khona nomuntu ozobe ephuma ehhovisini likaNdunankulu wesifundazwe uMnu Willies Mchunu ngoba lezi zinkinga azithinti nje kuphela abasebenzi baseMgungundlovu kodwa bonke abasebenzi basemakhazeni kahulumeni kwisifundazwe sonke.
“Abasebenzi basitshela ngezinkinga ababhekene nazo okubalwa khona izimo zokusebenza ezingekho ezingeni, ingqalasizinda, kanye nokungakhushulwa kwabo. Ezinye zalezi zinkinga zisuka kunyaka wangezi-2015. Laba basebenzi batshelwa nokuthi kumele bahlonze izidumbu nokuyinto abangazange bayifundele. Ngesikhathi beqala babebizitshela ukuthi yinto yesikhashana futhi bazothola umvuzo ngayo ngoba ayiyona ingxenye yomsebenzi okwakuvunyelwene ngayo kodwa loko akwenzeki,” kubeka yena esho nokuthi ezinye izimoto ezihamba abasebenzi uma beyolanda imizimba azikho esimweni njengoba zingenawo ngisho ama-brakes.
Uthe kukhona nezimali zamabhonasi ezikweletwa abasebenzi okwakumele bakhokhelwe zona ngenyanga kaMbasa (April) kulonyaka kodwa kuze kube imanje abakazitholi lezo zimali.
“Ungqongqoshe asifuni ukuthi afike yena agqoke amajazi amhlophe athi uyazenzela umsebenzi kodwa sifuna qahamuke nesu lokulungisa lezi zinkinga ngoba loku kufana nokungalethwa kwezidingo kumphakathi kanye nabasebenzi,” kubeka yena. Umnyango wezeMpilo kulesisifundazwe awuzange uyiphendule imibuzo obuthunyelelwe yona i-Echo kodwa uvele wakhipha isitatimende.
Kulesi sitatimende kuvezwe ukuthi izinkinga zabasebenzi kubhekenwe nazo kwi-National Bargaining Council nalapho uMnyango wezeMpilo uzethemba khona ukuthi isisombululo esinokuthula izotholakala maduze.Siqhube sathi ngeshwa nakuba kunjalo loku akubanqandi abanye abasebenzi ukuba bangezi emsebenzini ngokungekho emthethweni.
“Kuthiwa abanye babasebenzi bagxambukela kwizinsiza zokusebenza zakule ndawo okubalwa kuzona i-Air conditioning system ukuze kuzophazamiseka ukusebenza okujwayelekile.Abanye kusolwa ukuthi sebebike ukuthi bayagula babaningi bangezi emsebenzini.
“Umnyango ufuna ukukuqinisekisa umpahkathi ukuthi unezindlela zokuvimba uku thi kutakelane imizimba uma ngabe kungukuthi isiteleka sabasebenzi esingekho emthethweni siyaqhubeka.Umnyango angeke uze unanaze ukusebenzisa amalungelo awo kulolu daba ngokomthetho wabasebenzi i-Labours Relations Act,” kuphetha sona.